Maamulka G/Banaadir oo ku Guulaystey Nalalka ku Shaqeeya Awoodda Tamarta. - iftineducation.com
iftineducation.com –Qaybo ka mid ah Wadada maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa lagu arkayay Ileyska baalayaasha nalalka oo lagu xiray Awoodda Solarka loo yaqaano.
Boqolaal ka mid ah dadweynaha Magaalada Muqdisho ayaa habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay qaybaha wadadaas ee nalalka lagu xiray iyadoona aad moodeysey in halkaa damaashaad uu ka jiray.
Dadka ayaa ku lugeynayay wadadaas iyagoo kor u dhowraya Nalalka ku shaqeeyaya Kulka cad Ceedda kuwaasoo ay sheegayeen in Ifkoodu uu ka badan yahay Ilayska kale ee caadiga ah.
Af hayeenka maamulka Gobolka banaadir oo ka mid ahaa dadkii Xalay halkaa u soo daawshada tegay ayaa saxaafadda kula hadlay isla wadadaas isagoona sheegey in baalayaashan ay ka soo bilaabanayaan illaa is Goyska Tiyaatarka haatana uu dhismahoodu ku eg yahay illaa is goyska Dabka.
Maxamed yuusuf af hayeenka maamulka Gobolka banaadir ayaa sheegey in hawshaasi ay iminka wadaan doonayaana si tijaaba ah in loo gaarsiiyo Km 4 haddii lagu guulaysatana la gaarsiin doono wadooyinka Magaalada Muqdisho oo dhan.
Af hayeenka ayaa ka digay waxyeeleynta baalayaashaas isagoona sheegey Gaarigii ku dhaca Mid ka mid ah Baalayaashaas in la ganaaxi doono Kun Doolar haddii uu bixin waayana lagu wareejin doono Dawladda ku meel gaarka Soomaaliya.
Af hayeenka maxamed yuusuf ayaa intaa ku daray in baalayaashaas iyo ilaalintooda ay si gaar ah ugu xil saran yihiin Guddoomiyayaasha Degmooyina ay baalayaashaasu maraan kuwaasoo uu sheegey in ay ka hayaan Ilaalo joogta ah.
Ugu danbayntii ayuu af hayeneku sheegay in ay jiraan Shaqaale dawladda Hoose ka tirsan oo si gaar ah howshaas loogu soo taba baray kuwaasoo qaabilsan xir xiridda iyo Rakibaadda Nalalkan ku shaqeynaya awoodda Cad ceedda.
Si kastaba Xalay ayaa damaashaad waxaa uu ka jiray qaybo ka mid ah Wadada Ma Al Mukarama iyadoona la arkayay Boqoaal dad ah oo ka kala yimid Degmooyinka Wardhiigleey, Hawl Wadaag, Xamar Weeune Xamar Jab Jab iyo Waaberi kuwaasoo marba dhinac ugu soconayay qaybaha Layrkaas lagu xiray iyadoona wejiyadooda laga dheehanayay farxad iyo Rayn Rayn.